Iipaki kunye nolondolozo lwendalo kwiAmazon yaseColombia | Ukuhamba kwe-Absolut
Iipaki kunye nolondolozo lwendalo kwiAmazon yaseColombia
Malunga ne-50% yommandla we Kholambiya ihlala amahlathi abanzi kwaye ashinyeneyo. Ingaba i IAmazon yaseColombia, emi emazantsi eli lizwe. Iintyatyambo nezilwanyana zayo bubutyebi bendalo obuxabisekileyo obukhokelele ekubeni ilizwe lihlelwe njengenye yeendawo ezininzi eziphilayo emhlabeni.
Kumzamo wokukhusela eli lifa, oorhulumente abohlukeneyo belizwe benze uthotho lweepaki kunye nolondolozo lwendalo oluncedileyo ukugcina ubutyebi bendalo IAmazon yaseColombia, kodwa kunye nempembelelo yayo yenkcubeko, kuba baninzi abantu bomthonyama abahlala kulo mmandla.
IAmazon yiyo omnye wemimandla emithandathu yendalo yaseColombia. Ngokulandelelana, le yinxalenye yesakhiwo sendalo esibanzi kakhulu, Amazon, efikelela nakwamanye amazwe akuMzantsi Melika afana neBrazil, Venezuela, Ecuador, Guyana, Suriname, Peru kunye neBolivia
Ngaphezulu kwe-480.000 yeekhilomitha ezandisiweyo zokongezwa, ihlala ingekho ngaphantsi kwe-40% yomhlaba opheleleyo welizwe. Ukanti yeyona ndawo inabemi abancinci eColombia, ingingqi abantu abangakhange bakwazi ukuyenza ekhaya.
Kukho iipaki ezilishumi elinambini kunye nolondolozo lwendalo kwiAmazon yaseColombia. Ezi zezona zibalulekileyo:
1 Ipaki yeSizwe yaseLa Paya
2 Ipaki yendalo ye-Amacayacu
3 Ipaki yeSizwe yaseCahuinarí
4 Indawo yokuGcina iNdalo yeSizwe yeNukak
Ipaki yeSizwe yaseLa Paya
Ngephenyane kwiindlela zamanzi zePaki yeSizwe yaseLa Paya
Ime kwisebe lasePutumayo kwaye inendawo engama-422.000 eehektare. Iyaqwalaselwa indawo enezinto ezininzi ezahlukileyo emhlabeni, kunye namakhulu eentlobo zezilwanyana ezanyisayo, malunga neentlobo ezilishumi elinesihlanu zeentaka kunye neentlobo ezingaphezu kwezigidi ezibini zezinambuzane.
Akukho nto intle kangako ziiflora zayo, ezibonakaliswa yimithi enezithsaba eziphakama phantse ngekhulu leemitha ukuphakama. Inkqubo ye- Ipaki yeSizwe yaseLa Paya Ikwabonelela ngokukhangeleka okumangalisayo kunye nothungelwano oluntsonkothileyo lwemilambo, amachibi kunye namachibi ahamba ngenqanawa apho bahlala khona ii-anacondas kunye nee-alligator ezimnyama.
Ipaki yendalo ye-Amacayacu
Ihlengethwa elipinki, "inkwenkwezi" ye-Amacayacu Natural Park
Le paki ime kwindawo ekunokwenzeka ukuba eyona ndawo ikude nengafikelelekiyo eColombia, indawo yehlathi elishinyeneyo apho imida yeli lizwe ihlanjululwe kunye neBrazil engummelwane.
Phakathi kwezinye izinto, i Ipaki yendalo ye-Amacayacu udumo lwayo kubukho beentlobo ezizodwa kwimilambo kunye namachibi ayo: ihlengethwa elipinki. Abakhenkethi abaninzi bangena kumbindi wehlathi laseColombia ukuze bakwazi ukucinga ngesi silwanyana sodwa sasemanzini emhlabeni sivela kumaqonga okujonga.
Ukongeza kwi dolphin epinki, le paki ilikhaya iintlobo ezingaphezu kwe-500 zeentaka kunye nenombolo engekagqitywa iintlanzi zasemanzini. Ikwalikhaya kwa jaguar, otters kunye neemanatees. Kwaye kuninzi Iimonos enokundwendwela kwi Isiqithi saseMocagua, Idume ngeentyatyambo zayo ze-lotus.
Ipaki yeSizwe yaseCahuinarí
Inommandla weehektare ezingama-575.500 kwaye ikwisebe leAmazonas. Iindidi zemithi emikhulu zikhula apho ngaphezulu kweemitha ezingama-40 ukuphakama. KwiPaki yeSizwe yaseCahuinarí ezinye Eyona milambo ibalaseleyo yaseColombia njengePamá, iCahuinarí okanye iCaquetá.
Ngokubhekisele kwizilwanyana, imozulu eshushu yetropiki ikhuthaza ukukhula kwezinambuzane nezirhubuluzi. Yintsimi ye ii-boas kunye nee-anacondas. Ezinye iintlobo zezinto ezimele ezi Jaguar kwaye, emilanjeni nasemadamini, ezoyikekayo ipiranha. Ipaki ikwalikhaya ezahlukeneyo Iindawo zemveli zoluntu lweBora-Miraña.
Indawo yokuGcina iNdalo yeSizwe yeNukak
Ummandla waseNunak uboshwe yimigodi emikhulu yemilambo
Le ndawo ibekwe kwisebe laseGuaviare. Inobunxantathu ukumila kwaye imida yayo iphawulwa ngumgaqo we-Inírida river ukuya emantla, iBocatí, Aceite kunye nePapunaua imilambo esempuma, kunye nemilambo iGuacarú ne-Inírida ngasentshona.
Kwelinye icala le Inírida ilele i IPakainaway Natural Park, engaphezulu kwesigidi seehektare ze-savanna kunye nehlathi laseAmazon, kanye kumda weColombia neBrazil.
Kuqikelelwa ukuba bamalunga namawaka amabini abantu bomthonyama abaphila, belandela iindlela zabo zokuphila ngokwesiko Indawo yokuGcina iNdalo yeSizwe yeNukak. Imalunga ne- Iqela leMaku, kuphela abemi bomthonyama baseColombia abasasindayo enkosi ngokusetyenziswa okuzinzileyo kwemithombo yendalo kunye nokugqitha kwihlathi laseAmazon.
Ukongeza kwezi paki zikhulu, kwiAmazon yaseColombia kufuneka sibonise iindawo ezintle nezonwabisayo ezinje nge ISierra de Chiribequete yePaki yeNdalo, apho ezinye iitepuis ziphakama, i IRío Puré iPaki yeSizwe yeNdalo, indawo yokugcina izilwanyana zasendle emazantsi eCahuinarí, okanye ISerranía de los Churumbelos Ipaki yeSizwe yeNdalo yeAuka-Wasi, yenye yeendawo zokugqibela ezikhuselweyo eziza kwenziwa ngaphakathi kweNkqubo yeePaki zeSizwe zaseColombia. Likhaya elingekho ngaphantsi kwekota yazo zonke iintaka zeli lizwe.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhamba kwe-Absolut » Iipaki kunye nolondolozo lwendalo kwiAmazon yaseColombia
UFrancisco José de Paula Santander, "indoda yomthetho"